शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यी १० अ’नौठा कुरा – – Life Nepali
शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यी १० अ’नौठा कुरा –
हाम्रो समाजमा अझै पनि यौ’नका कुरा खो’लेर ग’र्दैनन् । त्यसैमाथि यु’वतीहरु त झन् यो कुरामा एकदम प’छाडी नै छन् । एक अध्ययनका अनुसार हरेक यु’वती/महिलाले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उ’त्ताउलो खालको यौ’न अनुभव ग’र्न चा’हन्छन् । र मौ’का पाउँदा उनीहरुले अ’नौठा अ’नौठा यौ’निक अ’भ्यासको प’रीक्षण समेत गर्न म’न प’राउँछन् । के’टीहरुले यौ’नको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोंच्छन् ? अध्यनको निष्कर्ष यस्तो छ *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
१. अ’परिचितसँग से’क्सः
अधिकांस महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा न’राम्रो लाग्छ । तर कतिपय समयमा अ’परिचित पुरुषसँग यौ’न स’म्बन्ध राख्ने विषयमा महिलाहरु उ’त्तेजित हुन्छन् । अध्ययन भन्छ अपिरिचितसँग यौ’न स’म्बन्ध रा’ख्दा सबै सीमा भु’लेर र’माइलो गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोंचाइ हुन्छ ।
अधिकांस महिलालाई अ’पेक्षा हुन्छ कि कुनै पनि पुरुषले उनीसँग मालिक जस्तो व्यवहार गरोस् । उ’ठाएर ओ’छ्यानमा ला’गोस् र क’पडा खो’लेर क्रि’डा ग’रोस् । अलि हे’प्ने र हों’च्याए ज’स्तो गर्ने पुरुषसँग से’क्स गर्न रु’चाउदैनन् । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Previous तपाई पो*र्न फि’ल्म हे’र्नुहुन्छ ? हो’सिया’र ! यस्तो स’मस्या आ’इला’ग्ला …
Next यी राशी भएका यु’वती प्रेममा निकै बफादार हुन्छन ! जानी राखौं –
50 mins ago Life Nepali